Avhareji Yechidiki? | Martech Zone
Muvhuro, Nyamavhuvhu 7, 2006 Muvhuro, Nyamavhuvhu 24, 2009 Douglas Karr
Seth mazwi nhasi pane chinyorwa kubva ku LA Times. Chinyorwa chakanyatso tsanangurwa pane vane makore gumi nemaviri kusvika makumi maviri nemana ekuberekwa.
Sezvineiwo zvakakwana, chinyorwa chinotaura kuvana vanobva kuHollywood… asi mwanakomana wangu (17) ari pano muIndiana! Iwe uchaona kuti zviuru zvemamaira zvinowana musiyano mudiki pakati pezviviri, zvakadaro. Pane chero zuva rakapihwa, hezvino izvo iwe zvaunowana iwe mwanakomana wangu achiita:
Kugadziridza yake Nzvimbo yangu
Kugadziridza yake Blog
Kurekodha mimhanzi yake (Tarisa uone BillKarr.com)
Kunyora mimhanzi neshamwari dzake
Kusanganisa mimhanzi uchishandisa Acid Music Studio
Kuenda kunoratidzwa (madiki maconcert)
Kutaura kune mamwe maMySpaces
Chechi Yechidiki Boka
Kuverenga (ndinomuita kuti averenge… asi ari kutanga kuuya)
Bill ari kunze neshamwari mbiri parizvino kumamuvhi. Kuenda kumamuvhi kwakashoma kusingawanzo, hazvo… iyo inodimbura mubhajeti rake remumhanzi. Unogona kuona chinhu chimwe chisipo kubva pane zvaakanyora… TV. Ndinofanira kumuteterera kuti auye kuzoona terevhizheni neni! Mwanakomana wangu akasimba kusimba, ane moyo wakanaka, uye akagwinya. Munguva yakapfuura, akambotamba nhabvu, basketball, baseball, skateboarding, rollerblading, nezvimwe.
Pasina kumanikidzwa kubva kwandiri, mwanakomana wangu ane hunhu uye anofarira kushamwaridzana nevamwe. Dzese shamwari dzake dzakafanana. Ivo vane chaiyo yakasarudzika kuravira mumimhanzi, zvipfeko, bvudzi, shangu, nezvimwe… zvese izvo zvisiri zvakakurisa. Muchokwadi, hukuru muvengi. Izvo zvinondidzosera kumashoko aSeth:
Kana iwe uri kubatikana kushambadzira senge iwe wawana kutarisisa kwangu, iwe watove watoita kukanganisa kukuru.
Mwanakomana wangu anofanira kunge ari mushambadzi anotyisa. Anenge ese ake 'kuravira' kunouya kubva kune ake maitiro ehukama, uye hapana kana icho nekushambadzira kukuru. Ndicho chaicho chinhu chekufunga nezvacho! Handifunge kuti mwanakomana wangu anofinhwa. Muchokwadi, ini ndinofunga zvakangopesana. Iye chaizvo ari kuyedza kuita chimwe chinhu chinogadzira mamineti ese ezuva rega rega. Ari kurarama hupenyu kuzere uye haadi kutambisa miniti yeiyo chero awa.
Uye… kusiyana nemadzibaba mazhinji evanakomana vari kuyaruka, haanditenderi kupenga. Iwe uchatiwana tichiseka uye tichitenderedza takatenderedza husiku hwega hwega. Ini handimbofa ndakamutora seavhareji - iye akanaka murume wechidiki wandinovimba achawana zvakanyanya muhupenyu.
PS: Ini ndichiri kufanire kumuita kuti aburitse imbwa kunze, asi ini ndichaita nazvo chero zuva zvichienzaniswa neizvo baba vangu vaifanira kubata!
PPS: Ndine mwanasikana wemakore gumi nemaviri anoenzana zvinoyemurika, asi ndinomubvisa pa internet.
Kana Psychopaths ichienda kuBasa